Cunto biyo-biyoodka la cuni karo (Angela Nino) - Farsamooyinka Cunnada
Cunto biyo-biyoodka la cuni karo
Martida Martida Angela Nino ee Sanduuqa Rinjiga waxay muujineysaa sida loo sameeyo maydhashada biyo-biyoodka la cuni karo.
Biyaha-biyoodka la cuni karo ayaa ah dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo loo isticmaalo wax kasta oo qurux badan. Fondant, gumpaste, moodelista shukulaatada, miraha boqortooyada, warqad wafer ah iyo inbadan. Midabada ayaa aad ugu falceliya sida biyo-biyoodka dhabta ah iyo sababta oo ah waxaa lagu sameeyay aalkolo, dareeraha ayaa uumi baxa si deg deg ah isagoo ka tagaya kaliya midabka. Tani runti waa muhiim maxaa yeelay haddii aad biyo isticmaasho, dareeraha wuxuu u eg yahay inuu milmo sonkorta oo uu sababo qasnaan.
Waxaan markii ugu horreysay ka bartay biyo-biyoodka la cuni karo ee cajiibka ah ee Angela Nino ee Sanduuqa Rinjiga. Waxay ku sameysaa kukisyadan cajiibka ah ee leh saameynta quruxda badan ee farshaxanka. Iyadu waa farshaxanno wadnaha ah iyo buskudkeedu waa dhexdhexaadkeeda. Aad ayaan u farxay markii ay nala wadaagtay cuntadan maxaa yeelay runtii waxay noqotay mid muhiim u ah keega qurxintiisa waxaanan ku leeyahay dhammaanteed maskaxdeeda
sida loo sameeyo keeg ka fiican sidii hore
Fiiri casharka buuxa ee ku saabsan sida loo sameeyo biyo-biyoodka la cuni karo hoosta
Samee biyo-biyoodyo la cuni karo. Cuntada laga helo Angela Nino ee Sanduuqa Rinjiga Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:0 daqiiqado daweynta:1 d Wadarta Waqtiga:1 d 5 daqiiqado Kalori:190kcal
▢4 ounces weligaa cad ama aalkolo kale oo sarreysa oo sarreysa
▢1 Miisaska cuntada midabaynta cuntada
Ku rid midabaynta cuntadaada weel dhalo ah
Ku shub barnaamijkaaga 'Everclear'
Isku qas oo dabool daboolka. Isku-darka ha daaweeyo habeenkii.
Kala sooc jeexjeexa jel. Hadda midabkaaga biyaha ee la cuni karo ayaa diyaar u ah in la isticmaalo.
Cunto-cunista shukulaatada ugu fiican
Cuntada asalka ah ee keega jilicsan ee casaanka ah
sida loo daboolo keeg leh jacayl bilowga ah
sida loo sameeyo sanduuq isku darka keega oo qoyan
Cunto karinta ugu fiican ee lagu qurxiyo fondant
sida loo sameeyo keega sanduuqa isku dhafan oo qoyan
Barbaarinta Cake Square Fondant Cake
Sida loo sameeyo keeg laba jibbaaran oo laba jibbaaran loona helo kuwa geesaha adag leh iyo geesaha. Dhamaan talooyinkeyga iyo tabaha aan ugu talagalay keeg laba jibbaaran oo aan iin lahayn!
Saliida talyaaniga ee meringue waa tan ugu xasiloon dhamaan cuntooyinka qabow ee saliida lagu shubo. Aad uma macaan oo xariir jilicsan.